Amandla Wetimu Engamashumi Amabili Nanye Ye-WordPress | Martech Zone
Ngempelasonto, ngishintshe eyami WordPress isihloko emuva ku Amashumi amabili nanye. Ngingasho ngobuqotho ukuthi ngijabule ngomklamo manje. Ngiyivumelanise nentando yami futhi angizange ngize ngithinte ikhodi. Manje ungangizwa kabi, kunezikhathi lapho ngithanda ukudilika ungene esihlokweni bese ngigenca ukukhwabanisa, kepha ukubhuloga kunzima ngokwanele njengoba kunjalo. Angidingi ukucindezelwa okungeziwe mayelana nesici sokuklama esingafakwanga, noma amaphutha aqhubekayo ngoba enye idatha ayidluliswanga kahle. Manje sengingagxila kubhulogi.
Itimu eyi-Twenty Eleven ayisihle kuphela futhi ilula, kepha futhi inamandla futhi iyaguquguquka ngokweqile. Yenziwe yiqembu leWordPress, okusho ukuthi abantu abakuqonda ngokugcwele futhi baqonde okuphakathi nokuphuma kweWordPress benze itimu yokubusa konke.
Izici Ezingamashumi Amabili Nanye:
Izikimu zombala ezikhanyayo nezimnyama
Shintsha umbala wesixhumanisi
Amakholomu amabili, ibha eseceleni yangakwesokudla; Amakholomu amabili, ibha eseceleni yangakwesobunxele; Ikholomu eyodwa, ayikho ibha eseceleni
Amafomethi weposi ahlukene ayisikhombisa ongakhetha kuwo
Shintsha isithombe sangemuva kanye / noma umbala
Khombisa / fihla unhlokweni
Khombisa / fihla izithombe ezifakiwe
Zonke lezi zinketho ziyahlelwa kusuka kwimenyu engaphansi yokubukeka.
Ngaphandle kwezici ezengeziwe zengqikithi, uthola nokuthi yini ongayilindela kusihloko esigcwele se-WordPress:
Izithombe ezifakiwe ngokuthunyelwe ngakunye
Iwijethi ephelele iyakwazi
Amazwana akhiwe kahle
I-SEO inobungani, noma ngabe kufanele ucabangele ukusebenzisa indlela ye- I-Yoast WordPress SEO i-plugin
Into yokugcina oyodinga ukufaka ifayili le- I-plugin ye-WP Touch futhi usulungele iselula, futhi! Ngiyazi umuzwa wokufuna ukwakheka / ingqikithi engcono kakhulu yamasayithi wami - eyingcweti neyomuntu ngokufanayo. Kulula ukulahla umkhondo wenhloso yakho yangempela: ukubhuloga! Amashumi amabili nanye yi- khulula Ithuluzi okufanele ulisebenzise ukunciphisa umaye wokwakha nokuphatha itimu ye-WordPress.
Tags: umphendulilogo ye-bmwi-datasiftabakwa-spammers
Dec 5, 2011 ku-11: 55 AM
Ngivumelana nawe ngokuphelele, kepha ngilahlekelwe yinto eyodwa engqikithini ka-2011 - ayisekeli ibha eseceleni kokuthunyelwe namakhasi, ngakho-ke noma kunini lapho usetha ibhulogi ngalesi sikhathi udinga ukuphinda futhi bese uhlela i-single.php nekhasi .php amafayela.
Mar 16, 2012 ku-8: 41 PM
Ngingasikisela ukuvakashela http://www.borgyborgy.net Inikeza izihloko zamahhala ze-pixel eziyi-1000 × 288 zamahhala, ukwenza ngezifiso itimu ye-TwentyEleven ezenzakalelayo. Isebenziseka kubaqalayo be-blog. Ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso ukufakwa okujwayelekile, kuvumele i-newbie ukuthi ibe nebhulogi eyenziwe ngokwezifiso futhi elungele ngemizuzu embalwa. Zonke izithombe zithathwe yimina futhi ngizinikeze ngaphansi kwelayisense ye-Creative Commons 3.0.